मेरो कला ब्लग - डेविड ब्रिडबर्ग Modern पोस्ट आधुनिक ग्यालरी
जुन 6, 2021 जुन 6, 2021
डेभिड ब्रिडबर्ग द्वारा बेयर हड्डीहरू मेरो कला कहानी एक डिजिटल कलाकार बन्न साधारण धारणा संग २०० to मा फिर्ता जान्छ। मेरो क्यारियर २०१२ मा आत्म अध्ययन संग शुरू हुन्छ। २०१ 2006 मा मेरो उत्तर आधुनिकताले फल फलाउन थाल्छ। हड्डीहरू खुला राखिएको छ, म भोको कलाकार हुन चाहन्न। पछिल्लोमा ...
पढाइ जारी राख्न गुगल, माईक्रोसफ्ट, फेसबुक र इंस्टाग्राम पसल र स्टोरहरू
नोभेम्बर 1, 2020 मार्च 23, 2021
अमूर्त कलाकार र कला: कालो र सेतो, परिभाषा, ज्यामेट्रिक, र आधुनिक एक शुरुआतीको रूपमा चाहिएको कलामा कतै सुरु गर्न चाहानुहुन्छ तपाईंले कतै सुरु गर्नु पर्छ। म आशा गर्दछु कि तपाईले मेरा लेखहरू रमाईलो पढ्नुहुनेछ। KISS र सिर्जना गर्नुहोस्, तपाईं एक रमाईलो सार कलाकार हुन सक्नुहुन्छ। सीधा अगाडि डिस्क्लेमर: मेरो कथामा टाँस्दै तपाईं…
पढाइ जारी राख्न शुरुआतीका लागि एब्स्ट्र्याक्ट कलाकारहरू कसरी हेर्ने
सेप्टेम्बर 19, 2020 मार्च 23, 2021
किन भिन्सेन्ट भ्यान गग् चित्रहरू? भिन्सेन्ट भ्यान गोघले आफ्ना कुनै पनि मास्टरपिसहरू कहिल्यै बेचेनन्। त्यो डुब्न दिनुहोस्: हामी मध्ये धेरैको लागि, कला संघर्षको बारेमा छ। त्यसो भए शुरुआतीका लागि कहाँ सजिलो हुन्छ? धेरै व्यक्तिहरूका लागि डिजिटल कलाकृतिले तपाईंको हात मैला हुने सबै आनन्द दिन्छ, तर औंला पेंटिंग बिना ...
पढाइ जारी राख्न कसरी म सजीलो भिन्सेन्ट भान ग चित्रका साथ खेल्छु
सेप्टेम्बर 4, 2020 मार्च 23, 2021
१० डेभिड ब्रिडबर्ग द्वारा विशेष रूपमा चित्रकारी अद्भुत फूलहरू एउटा नयाँ प्रोजेक्ट शुरू गर्नु कठिन हुन सक्छ। म त्यो बुझ्छु। चीजहरूलाई सानो टुक्रा पार्नुहोस्। यसलाई सरल राख्नुहोस्। एउटा खुट्टा अर्कोको अगाडि राख्नुहोस्। मैले त्यो गरेँ। अब केहि बर्ष पछि मसँग कलाको 10०० जति कामहरू छन्। शुरुआतीदेखि विशेषज्ञसम्म यी…
पढाइ जारी राख्न कसरी मेरो फूल चित्रकारी बनाउन को लागी सजिलो छ